🥇 ▷ Télécharger le dernier APK PDF to the Word converter 1.0.23 ✅
Télécharger le dernier APK PDF to the Word converter 1.0.23
PDF to Word Converter Latest APK 1.0.23 (1000023) waa codsi wax ku ool ah oo kuu oggolaanaya inaad u beddelato faylasha PDF kan Ms. Word. Sidaa darteed, waxaad si fudud u tafatiri kartaa faylasha. Kani waa codsi beddelaad fasalka koowaad. Codsigan waxaa soo saaray Cometdocs Inc. Dabcan, tani waxay u noqon doontaa mid aad u faa’iido badan dadka isticmaala. Waxaa loo heli karaa PC iyo Android.
Beddelaha macluumaadka ka socda PDF illaa faylasha Word
Soo saare: Cometdocs Inc.
Nooca: 1.0.23 (1000023)
Cabbirka faylka 3.6 MB
Lasoo saaray: Sebtember 8, 2019 saacadu markay tahay 10:34 GMT + 07
Baahiyo: Qalabka kala duwan.
U soo degso PDF to Word Converter APK 1.0.23
Dib u eegista PDF ilaa loo beddelo Ereyga
Loogu tala galay barnaamijyada Android, tani waxay ku imaanaysaa is-afgarad fiican. Waa fududahay in la isticmaalo si qof walbaa si fudud ugu hawl geli karo. Xitaa haddii aad tahay bilaaw, ma la kulmi doontid dhibaatooyin. Markaa waxay noqotaa xalka wanaagsan. Waxaa jira astaamo badan oo ay soo bandhigtay barnaamijkan Android. Marka hore, waxay kuu oggolaaneysaa inaad faylasha PDF ugu beddelatid Ereyga. Intaa waxaa sii dheer, codsigan wuxuu sidoo kale faa’iido u leeyahay wareejinta miisaska PDF ee Ms. Word ilaa Ms. Excel. Kadibna, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay u beddelaan faylasha PDF si toos ah Ms. Word.
Intaa waxaa sii dheer, barnaamijkan Android wuxuu la jaan qaadayaa Citriz XenApp iyo Terminal Servers. Astaantan ayaa u oggolaaneysa codsiyada ay adeegsadaan isticmaaleyaal badan. Hadana wali waxaa jira muuqaalo kale oo farabadan, sida isku-darka tooska ah ee qoraalka joogtada ah, sicirka beddelka degdega ah, iwm.
PDF si loo badalo Word for Android ma aha mid adag. Waxay bixisaa maarayn fudud iyo waxqabadka wanaagsan si loo badbaadiyo ilaha. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale bixisaa nabadgelyo wanaagsan. Marka, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in tani ay tahay file wanaagsan oo loogu badalayo Android. Hadda, waxaad tijaabin kartaa sida ay u fududahay in loo beddelo PDF erayga. Haddii aad xiiseyneyso, waa inaad marka hore soo dejiso. Kadib rakibidda, isla markiiba waad u adeegsan kartaa ujeeddooyinkaaga gaarka ah ee la xiriira beddelista faylka.
Hagaajinta dhiqlaha iyo hagaajinta waxqabadka.